यस्तो देखेपछि राजेश पायलको आक्रोश, कारबाहीको माग गर्दैछन् - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक २५, २०७४ समय: १७:४५:४२
कलाले जात धर्म भन्दैन । स्वतन्त्र छ, जस्को लागि पनि ठिक्कै हुन्छ । तर यहि कलाको दुरुपयोग भयो भने कोहि चुप बस्न सक्दैनन् । यहाँ यस्तै भएको छ । गायक राजेश पायल राईले एक तस्बिर आफ्नो फेसबुक पेजमा सार्बजनिक गर्दै कलाको बैज्जत गर्ने माथी कारबाहीको माग गरेका छन । उक्त तस्बिरमा अपुर्ण एक सालिक छ । जुन सालिक स्वर सम्राट स्वर्गीय नारायण गोपालको हो । नेपालको राजधानी मै रहेको चक्रपथमा देखिएको दृश्य यो तस्बिरमा कैद भएको हो । हेर्नुस उक्त तस्बिर ।
यो तस्बिरलाई नियालेर हेर्दा पुर्ण भएको सालिक भत्काईएको देखिन्छ । यति मात्र हैन त्यहा लेखिएका अक्षरहरु पनि उल्टो छ । हो, यहि कुरामा गायक राईले आक्रोश पोख्दै यस्तो स्टाटस लेखेका छन :
‘म स्वर सम्राट नारायण गोपाल लाई इस्वर मान्छु,एस्तो आफ्नो इस्वर प्रती अन्याय भएको देख्दा सार्है दुख लाग्यो .
सम्मानानीय प्रधान मन्त्री ज्यु महा नगर प्रमुख ज्यु सस्कृती मन्त्री ज्यु यो हालत कस्ले गरेको हो तत्काल कार्बाही को माग गर्दछु साथै कला को सम्मान गर्न आग्रह गर्छु.. हेक्का रहोस,संगीत ले नै हो देस लाई जोड्ने !!पुनस्च अर्को रिस उठेको कुरा,यो काम गर्ने अनपढ थिए होला पढ्न सकेन त्यो ठेकेदार ले त पढ्न सक्थ्यो ? त्यो ठेकेदार को पनि लाईसेन्स खारेज होस अनि हाम्रो हक हित को लागि लड्ने सघ सस्था छ होईन र बोलेको देखिएन? अहिले नै बोलु है साथी हो भोली आफ्नो घर भट्काउदा या भट्किदा चाहिने आसु पुछिदिने त हामी नै हौ क्या रे .जय देस जय संगीत’ ।
यस्तो लापरबाही माथी आक्रोशित हुनु स्वभाबिक हो । माथी देखाईएको तस्बिरमा भएको सालिक यो तलको तस्बिरमा देखिएको स्थानमा राखिनु पर्ने हो तर, त्यो हुन सकेको छैन । यस्तो लापरबाहीलाई सरोकारवाला निकायहरुले छिट्टै निगरानीमा राखि कारबाहीको कार्यलाई अगाडि बढाओस् ।